LoH အကြောင်း – Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd.
Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd. > LoH အကြောင်း
Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd. မှ မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ခင်ဗျာ။
Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd သည် ၁၉၈၃ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင်၍ မိသားစုစီးပွားရေးအနေဖြင့် တည်ထောင် လာခဲ့ ပြီး ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီတွင် Trading Co.,Ltd. အသွင်သို့ ပြောင်းလဲ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ မိုးထက်ကမ္ဘာ Groups of Company နှင့် ပူးပေါင်း၍ မိုးထက်ကမ္ဘာGroups Of Company ၏ အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရပ်တည်လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် နှစ်စဉ်အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၏ကြီးကြပ်မူအောက်မှာ ရှိပါသည်။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်သော စာရင်းများအရ ကျွန်ုပ်တို့ Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd. သည် ၂၀၁၄ – ၁၅ တွင် ၂၈၁ ဆင့်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တွင် ၁၈၀ ဆင့် ရှိပြီး ၂၀၁၆-၁၇တွင် ၁၉၇ ဆင့်အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ ဆိုင်ခွဲများကို တောင်ကြီး ၊ မန္တလေး ၊ တောင်ငူ၊ သန်လျင်နှင့် မော်လမြိုင်တို့မှာလည်း ဖွင့်လှစ် ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် စတီးလ်နှင့် ပက်သက်သော ပစ္စည်းများကို အဓိကထား၍ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ပေးနေပါသည်။ ဂျပန် ၊ အိန္ဒိယ ၊ ထိုင်ဝမ် ၊ ဗီယက်နမ် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း အရည်အသွေးပြည့်မီသော ထိပ်တန်းမိတ်ဖက် စက်ရုံကြီးများ၏ ထိပ်သီးအရည်အသွေးရှိသည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို တင်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်လီ၊ လက်က္ကား ပြန်လည် ရောင်းလိုသူများနှင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများအားလုံးကို အထူး တန်ဖိုးထားလေးစားသည့်အနေဖြင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို သင့်တင့်မျှတသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို ဈေးကွက်ထဲတွင် သေချာစွာ မိတ်ဆက်ချပြနိုင်ရန်အတွက် [ Two Stars ] ကြယ်နီ၊ ကြယ်နက် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် သွပ်ပြားများကို ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံဖြင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။ GI , PPGI , Alu Zinc , GI (Plain) ,Four Angle , Colour Coil , Colour Plain, Colour4Angle , Composite , Smart Board , Plywood , Wire Rod , Deformed Bar , Hollow, C-Channel , Angle , I-Beam , H-Beam , U-Beam , Decking Sheet အစရှိသည့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို အရည်အသွေးမှန် ဈေးနှုန်းမှန်ဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။
၏ Main Office သည်
စော်ဘွားကြီးကုန်းအဆောင် -၂၅ ၊ အခန်း (၇/ ၈/ ၉ ) ကျောက်စိမ်း(၄)လမ်း တွင်တည်ရှိပြီး
ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲကိုမြောက်ဥက္ကလာအခန်းနံပါတ် (G 17/18) သီရီမင်္ဂလာဈေးသစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
Royal A To Z Holdings Co.,Ltd သည် ဆိုင်ခွဲပေါင်း (၅) ခုရှိပါသည်။
သန်လျင် ၊ တောင်ကြီး ၊ တောင်ငူ ၊ မန္တလေး ၊ မော်လမြိုင်တို့ တွင်ဖြစ်ပါသည်။
အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ A To Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များရှိသောမည်သည့်နေရာဒေသတွင်မဆိုပစ္စည်းမှန် ၊ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Lwin Oo HtweCo.,Ltd ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိတ်ချယုံကြည်အားထားရဆုံးအိမ်ဆောက်ပစ္စည်း Company ဖြစ်စေရန် နေ့စဉ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိပါသည်။
သင့်တင့်မျှတသောဈေးနှုန်း ၊ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer များရရှိစေရန်
C –Caring ( အလေးထားခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့သည်အားလုံးသော Customer ၏ Needs & Wants များကိုအစဉ်အမြဲအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်)
O –Orderly ( အစီအစဉ်တကျဖြစ်ခြင်း -Customer များထံသို့ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ ကိုတတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးနှင့် အစီအစဉ်တကျ ဆောင်ရွက်ပေး ရန်)
R -Reliability ( စိတ်ချယုံကြည်ခြင်း - အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုသင့်တင့်မျှတသောဈေးနှုန်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ Customer များစိတ်ချယုံကြည်စွာ ၀ယ်ယူ အားပေးနိုင်ရန်)
E -Efficiency ( အချိန်တိုအတွင်းထိရောက်သောအကျိုးကျေးဇူးရရှိခြင်း - စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အချိန်တိုအတွင်းထိရောက်သောအကျိုးရလဒ် ၊ အမြင့်မားဆုံးအောင်မြင်မှုအစဉ်အမြဲရရှိစေရန် အမြဲသတိပြုဆောင်ရွက်ရန် )
V -Variety ( အမျိုးအစားစုံလင်များပြားခြင်း - စုံလင်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို Customer များရရှိနိုင်ရန် )
A - Adaptability ( လိုက်လျောညီထွေခြင်း - နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကဏ္ဍအပါအ၀င် အမြဲပြောင်းလဲတိုးတက်နေသောဈေးကွက် အခြေအနေတို့နှင့် အညီလိုက်လျောညီထွေ
L –Loyalty ( သစ္စာရှိခြင်း - ဖောက်သည် customer များကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အမြဲသစ္စာထားကာအကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်)
U -Unity ( တစ်သွေးတစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်း - Customer များကိုအကောင်းဆုံးရလဒ် များ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ “ LwinOoHtwe (လွင်ဦးထွေး) “ မိသားစုမှ စည်းလုံးညီညာစွာအတူတကွ ကျိုးပမ်းအားထုတ်ဆောင်ရွက်ရန် )
E -Economy ( ဈေးကွက်စီးပွားရေး - ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းဖြင့်နိုင်ငံ့ စီးပွားရေးအခန်းကဏ္ဍ၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်
S -Satisfaction ( စိတ်ကျေနပ်မှု - Customer များစိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေရန် ၄င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအစဉ်နားစွင့်လျက် customer များမျှော်လင့်သည်ထက် သာလွန်
Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd.၏ Main Office သည် စော်ဘွားကြီးကုန်း အဆောင် -၂၅ ၊ အခန်း (၇/ ၈/ ၉ ) ကျောက်စိမ်း (၄)လမ်းတွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲကို မြောက်ဥက္ကလာ အခန်းနံပါတ် (G 17/18) သီရီမင်္ဂလာဈေးသစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
Royal A To Z Holdings Co.,Ltd သည် ဆိုင်ခွဲပေါင်း (၅)ခုရှိပါသည်။ သန်လျင် ၊ တောင်ကြီး ၊ တောင်ငူ ၊ မန္တလေး ၊ မော်လမြိုင်တို့ တွင်ဖြစ်ပါသည်။အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ A To Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များရှိသော မည်သည့်နေရာဒေသတွင်မဆို ပစ္စည်းမှန် ၊ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။